Unai Emery oo ka warbixiyay himiladiisa ugu weyn ee Arsenal kahor kulanka habeen dambe ee finalka Europa League – Gool FM
(London) 28 Maajo 2019.Tababaraha kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id ee gaar ah kahor ciyaarta ay habeen dambe kula ciyaari doonaan Chelsea finalka tartanka UEFA Europa League.
Unai Emery ayaa ka hadlay wax badan ee quseeya kulanka habeen dambe dhex mari doono kooxaha Chelsea iyo Arsenal, xili sidoo kale uu muujiyay himiladiisa ugu weyn ee tababarka kooxda.
Macalinka reer Spain ayaa wuxuu ugu horeyn ka hadlay go’aankiisa kaga aadan goolhaayaha uu ku soo bilaaban doono kulanka finalka ee habeen dambe wuxuuna yiri:
“Wali go’aan kama aan gaarin arintaas, Petr Čech wuxuu u qalmaa in lagu kalsoonaado, waxaa suuragal ah inuu ku soo bilaawdo kulanka habeen dambe, sidoo kale waa macquul inuusan ku soo bilaaban, balse waa goolhaaye aad u fiican”.
Intaas kaddib Unai Emery ayaa wuxuu ka hadlay suurtagalnimada ay kooxda Arsenal kaga qeyb gali karto Champions League xili ciyaareedka xiga wuxuuna yiri:
“Waxaan heysanaa fursad maalinta barito ah, waan ognahay inaysan sahlaneyn arintaas, laakiin waxaan heysanaa fursad aan ugu guuleysan karno Europa League, isla markaana aan ugu gudbi karno Champions League xili ciyaareedka xiga”.
“Waxaan rumeysanahay inaan heli doono barito garab istaaga taageerayaal aad u badan, ha ahaato garoonkan quruxda badan ama England iyo meel kasta ee adduunka ah”.
“Arsenal waxay noqon doontaa mid ka mid ah 10-ka kooxood ee ugu sareysa aduunka, taasi waa hadafkayaga ugu sareeya ee xiligan”.
SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay Chelsea vs Arsenal ka hor kulankooda habeen dambe Final-ka Europa League… (Gunners oo xiddigaha ugu badan ku leh)